Android အစားထိုးအသုံးပြုဖို့ ကိုယ်ပိုင် OS တစ်ခုကိုဖန်တီးနေတဲ့ Huawei
30 Apr 2018 . 10:50 AM
ZTE ကို အမေရိန်ဈေးကွက်အတွင်း တင်ပို့ရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လည်း စိုးရိမ်မှုအချို့ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှာ Huawei ကတစ်ခုအပါအဝင်ပါ။ အမေရိကန်နဲ့ ဆက်သွယ်မှုဖြတ်တောက်ခံရရင် Android အသုံးပြုခွင့် လိုင်စင်ပိတ်ခံရနိုင်တာကြော်င့် ကုမ္ပဏီရှေ့ဆက်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
EMUi on current Android Based Phones
အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေအတွက် အမေရိကန်ပြင်ပက စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတော်တော်များများက Android ရဲ့အပြင်ဖက်အတွက် Plan B စဉ်းစားထားရပါတယ်။ Samsung ရဲ့ Tizen OS ကိုသင်မှတ်မိဦးမှာပါ။ Tizen OS ကတော့ အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါဘူး။ Huawei အနေနဲ့လည်း သူတို့ဖုန်းတွေအတွက် ကိုယ်ပိုင် OS တစ်ခုကို ဖန်တီးနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Huawei ကတော့ အဲ့ဒီ OS အသစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှပြောကြားထားတာ မရှိပါဘူး။ သေခြာတာတစ်ခုကတော့ Huawei P20 လိုဖုန်းမှာ Android မသုံးပဲ အခြား OS သုံးလာမယ်ဆိုရင် ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းဖို့လွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Huawei အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ OS အသစ်ကို မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ သုံးလာမှာမဟုတ်ပဲ Android ကိုပဲဆက်လက် အသုံးပြုနေဦးမှာပါ။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် OS ကလည်း Android နဲ့အဆင့်အတူတူလောက်ထိ မရောက်သေးတာကြောင့် User တွေစမ်းသုံးဖို့ခွင့်မပြုသေးပါဘူး။ Huawei က လက်ရှိ ဖန်တီးနေတဲ့ OS ကြ့ပီးတဲ့အဆင့်ရောက်သွားရင်တောင် ဘယ်အချိန်မှ ပရိတ်သတ်ကို ထုတ်ပြမလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိရသေးပါဘူး။ Android ကို အကြောင်းမရှိပဲ စွန့်လွတ်လိုက်ဖို့ဆိုတာ စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတော်တော်များများအတွက် မလွယ်တဲ့ကိုစ္စကြီးပါ။ Google ရဲ့ အရှိန်အဝါကြီးမားမှုကလည်း Andriod ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေကြားမှာ တော်တော်လေးလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ အကယ်လို့ သင်ဝယ်လိုက်တဲ့ဖုန်းအသစ်က Google နဲ့တွဲထားတဲ့ သင့်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေ၊ Mail တွေ၊ ဓာတ်ပုံ Backup တွေအတွက် Google Account နဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ App တွေမရှိဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
Android အစားထိုးအသုံးပွုဖို့ ကိုယျပိုငျ OS တဈခုကိုဖနျတီးနတေဲ့ Huawei
ZTE ကို အမရေိနျဈေးကှကျအတှငျး တငျပို့ရောငျးခခြှငျ့ပိတျပငျခံလိုကျရပွီးတဲ့နောကျပိုငျးမှာ အခွားကုမ်ပဏီတှအေနနေဲ့လညျး စိုးရိမျမှုအခြို့ဖွဈပျေါနပေါတယျ။ အဲ့ဒီထဲကမှာ Huawei ကတဈခုအပါအဝငျပါ။ အမရေိကနျနဲ့ ဆကျသှယျမှုဖွတျတောကျခံရရငျ Android အသုံးပွုခှငျ့ လိုငျစငျပိတျခံရနိုငျတာကွျောငျ့ ကုမ်ပဏီရှဆေ့ကျဖို့ အခကျအခဲဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
အဲ့ဒီလိုမြိုးအခွအေနတှေအေတှကျ အမရေိကနျပွငျပက စမတျဖုနျးကုမ်ပဏီတျောတျောမြားမြားက Android ရဲ့အပွငျဖကျအတှကျ Plan B စဉျးစားထားရပါတယျ။ Samsung ရဲ့ Tizen OS ကိုသငျမှတျမိဦးမှာပါ။ Tizen OS ကတော့ အောငျမွငျမှုမရရှိခဲ့ပါဘူး။ Huawei အနနေဲ့လညျး သူတို့ဖုနျးတှအေတှကျ ကိုယျပိုငျ OS တဈခုကို ဖနျတီးနခေဲ့တာ ကွာပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ Huawei ကတော့ အဲ့ဒီ OS အသဈနဲ့ပတျသကျလို့ ဘာမှပွောကွားထားတာ မရှိပါဘူး။ သခွောတာတဈခုကတော့ Huawei P20 လိုဖုနျးမှာ Android မသုံးပဲ အခွား OS သုံးလာမယျဆိုရငျ ဈေးကှကျထဲမှာ ရောငျးဖို့လှယျကူမှာမဟုတျပါဘူး။
Huawei အနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ OS အသဈကို မကွာခငျအခြိနျအတှငျးမှာ သုံးလာမှာမဟုတျပဲ Android ကိုပဲဆကျလကျ အသုံးပွုနဦေးမှာပါ။ သူတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျ OS ကလညျး Android နဲ့အဆငျ့အတူတူလောကျထိ မရောကျသေးတာကွောငျ့ User တှစေမျးသုံးဖို့ခှငျ့မပွုသေးပါဘူး။ Huawei က လကျရှိ ဖနျတီးနတေဲ့ OS ကွ့ပီးတဲ့အဆငျ့ရောကျသှားရငျတောငျ ဘယျအခြိနျမှ ပရိတျသတျကို ထုတျပွမလဲဆိုတာ ဘယျသူမှမသိရသေးပါဘူး။ Android ကို အကွောငျးမရှိပဲ စှနျ့လှတျလိုကျဖို့ဆိုတာ စမတျဖုနျးကုမ်ပဏီတျောတျောမြားမြားအတှကျ မလှယျတဲ့ကိုစ်စကွီးပါ။ Google ရဲ့ အရှိနျအဝါကွီးမားမှုကလညျး Andriod ဖုနျးအသုံးပွုသူတှကွေားမှာ တျောတျောလေးလှမျးမိုးနပေါတယျ။ အကယျလို့ သငျဝယျလိုကျတဲ့ဖုနျးအသဈက Google နဲ့တှဲထားတဲ့ သငျ့ရဲ့ ဖုနျးနံပါတျတှေ၊ Mail တှေ၊ ဓာတျပုံ Backup တှအေတှကျ Google Account နဲ့ကောငျးကောငျးအလုပျမလုပျဘူး၊ App တှမေရှိဘူးဆိုရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ?